Gini bu eziokwu banyere mwakpo nke onwu n'ihi nwayi nke puru ime na Assen? : Martin Vrijland
Gini bu eziokwu banyere mwakpo nke onwu n'ihi nwayi nke puru ime na Assen?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 August 2019	• 5 Comments
isi mmalite: nrc.nl
Ọ bụ akụkọ dị oke egwu na mgbasa ozi na Satọdee gara aga. Ma dị ka m nyocha a ya na onye isi obodo Marco Out na weebụsaịtị nke NOS na-eleghachi anya azụ, mmetụta dị mma nke ime ihe na-apụta ọzọ. Pedophile nke ndi nwoke 5 tiri ya ihe; Onye gburu ya egbu. Nwatakịrị nwanyị dị afọ anọ kwesịrị ime omume rụrụ arụ na ebe a na-egwuri egwu, yabụ ị na-akpọda ndị enyi gị niile iji mebie mmekọrịta nwoke na nwanyị ahụ. Ọ bụ na ọ dara ụda ikwenye ekwenye? Mba, ọ naghị ada ụda dị ka nke a.
Enwere m ike iche na ọ bụrụ na ụdị ihe a mere, ị ga-egbu ya ozugbo. Don'tkwesighi ịkụda ndị enyi anọ maka nke ahụ. Ewezuga na pedophile ahụ bụ onye agha MMA na-akwụghị n'efu, mana nke ahụ yiri m ka ọ na-adabaghị na atụmanya.
"Gịnị mere ugbu a, kedu ka m ga-esi merie ya, gịnị ka m hụworo?"Mayor Marco Out na-agbadata ntakịrị obere nke ọma na NOS ajụjụ ọnụ. Onye na-ekwuchitere onye na-akọ akụkọ ya na vidiyo izizi (lee Ihe NOS) dịkwa mma n’okwu ya ma ka ọ dị ugbu a anyị hụ etu e si bulie ụlọikwuu n’azụ, nke mere na n’ezie ihe ọ bụla agaghị egosi ndị bi n’obodo ahụ. Na nkenke: enwere ezigbo ohere na anyi ga na -eme ihe banyere ozi na - ezighi ezi nke mgbasa ozi mbu. Akụkọ enwe enwe na onodu nke maxim 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta". Kedu ka nke ahụ si bụrụ maxim? Odi nma, imeputa (imeputa onwe gi). Na-akpali mmeghachi omume (site na mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta) n'etiti ndị mmadụ ma hụ na onye ọ bụla nwere oke iwe iwepụta azịza ahụ. Nke a bụ iwu ọhụrụ siri ike mgbe ọ bụla.
Already chebuola iwu ọhụrụ ahụ siri ike ga-adị mgbe akụkọ a sitere na Assen: nchebe ọzọ maka ndị na-edina ụmụaka, ka anyị ghara imechi ha ọnụ. N'ọnọdụ ọ bụla, onye na-azụ atụrụ ga-enweta ọkwa nke onye a ga - eme ihe n'ụzọ a na ihe ọ bụla ị na - enye ọnọdụ onye ọ metụtara, ịchọrọ inye ya nzuzo na nzuzo. Naanị chere. Ebu m amụma na ọ na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Ndo, ma odighi m ya egwu na ndi enyi gi na - egwu ilu. Nwere ike ime nke ahụ dị ka onye mbụ na-emegharị onwe gị. Enyi agaghị enyere gị aka iti mmadụ ihe, n'ihi na ndị enyi ga-egosi gị afọ ole ị ga-agafe n'ofe. Ọzọkwa, ndị enyi ndị ahụ aghaghị ịhapụ ụlọ mmanya ma kwuo hoo haa, ekwetaghị m na mmụọ ịchụ àjà dị otú a gbanyere mkpọrọgwụ n'obi onye Dutch. Onye ọ bụla na-eche ụlọ nke ya, osisi, anụ ọhịa, yabụ ị gaghị enyere enyi gị aka iti mmadụ ihe. Anyị na-agba àmà ọzọ emeputa akụkọ ugha, ya na ndị na-eme ihe nkiri ị na-ahụ na fim a dịka ndị isi. Ihere mee gị!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nos.nl
Gini mere eji anakpo ndi mmadu imekorita anwughi anwuru na iwe na AI
Ònye chetara igbu nna Jeroen Denis na ụmụ ya Ruben na Julian? Echere ozi ọma
Tags: 4, Assen, onyeisi obodo, dood, agba, amia, Marco, nwa agbọghọ, ozi ọma, si, pedophile, gburu, vier, afọ anọ
26 August 2019 na 09: 10
Mee ma chepụta ma mee ka ọ bụrụ onye a ma ama, tọọ ụda ma ka ọtụtụ mmadụ ahụghị ihe kpatara ya
ikwere na ha agagh abia ihe di otua.
Ọ bụ ihe ihere na ha ewerela vidiyo nke Joris Truthseeker banyere onye na-egbutu igwe na ụgbụ,
eziokwu agaghị abata n'uche gị.
26 August 2019 na 13: 02
Ihe dị ka nke ahụ
gijs dere, sị:
26 August 2019 na 21: 43
kedu ihe dị iche mere na ebe a ma ọ bụ ihe mere okpu agha nke wakporo onye ji iheejiegwa nwa ya nwanyị ma banye n'ụlọ nga ogologo oge.
Ọ dọrọ ndị uwe ojii aka na ntị, mana ọ bịaghị, yabụ etinye aka.
Mana eee ị nwere ihe dị iche n’ezi-ikpe.
26 August 2019 na 22: 29
Ee, nwee ‘ikpe iwu’ nke ikpe ziri ezi, ikpe ziri ezi maka igwe ihe ọjọọ na ikpe nkwụcha iji nwee ike imechi iwu maka ndị na-eme ihe ike
27 August 2019 na 13: 04
Bie n'ime ntụ n'onwe gị, anụbeghị banyere ndị mmadụ na ntụ. Nwere a appie wee m chọpụtara ..
Akụkọ bụ na mbụ o pedo, dịkwa mma mgbe ahụ echere m na ọ dị mma. Ugbu a, a na-ekwukwa ya ọzọ na ọ bụ martin dara ogbi .. ma ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ n'ezie, amaghị m n'ezie, mana ya na nwoke 5 na 1 mmadụ, a gwa ya na a ga-ahapụ ha na Sọnde n'ihi na enweghị ihe akaebe banyere ya mkparị (tiri ya ihe ọnwụ na enweghị ihe akaebe? Hmm) ...
Logic ma doo anya abụghị ihe ndị uwe ojii na ndị mgbasa ozi, mana anyị amaralarị nke ahụ ..
Dị ka ihe ndị ọzọ, nke a bụ ihe onye ọ bụla ga-echefu na otu ọnwa ma ọ bụ 2, mgbe ahụ, a na-etinyerịrị usoro iwu na iwu ọhụrụ .. na-eme ihere oge niile ma ọ nweghị onye na-eche!
Kheb nke a sitere na rtvdrenthe na akụkọ. com
Daalụ maka nkwa gị ọzọ martin
" Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!
Yolanthe Cabau na usoro ndị uwe ojii, DNA, ọmarịcha John de Mol mmepụta (dịka ozi ANP) »
Nleta nile: 12.257.280
Ntinye op Ihe nlere mbụ Disney Channel kwuru na ndị pedophiles Hollywood metọrọ ya
SandinG op Ndi 911 bu oru ime? De Telegraaf nwere azịza nye ajụjụ gị niile!
Oghere ọdụm Siza op Kedu mgbe US ga-akwụ ụtụ ihu igwe maka bọmbụ ndị ahụ ha tụbara?
Martin Vrijland op Kpọ oku ngwa ngwa! Anyị ga-ewepụla usoro mgbasa ozi n'ọrụ ugbu a!
Jikọọ ndị 1.634 ndị ọzọ debanyere aha